तीर्थ लामा काभ्रे कांग्रेसको सर्वसम्मत जिल्ला सभापति ! – मिलिजुली खबर
तीर्थ लामा काभ्रे कांग्रेसको सर्वसम्मत जिल्ला सभापति !
नेपाली कांग्रेस काभ्रेको १४ औं अधिवेशनमा निकै रोचक गुट निर्माण र टुटफुट भएको छ ।
तीर्थ लामाले शिव हुमागाईं गुट छोडेर युवाहरूको नयाँ समीकरण बनाए । जुन समीकरणमा तीर्थ लामा, गणेश लामा, तीर्थ पसखल, महेश खरेल, कञ्चनचन्द्र बादे लगाएत थिए । पछि जिल्ला सभापति मधु आचार्य र उपसभापति अच्युत पौडेल पनि त्यो समीकरणमा मिसिए ।
तीर्थ लामाकै उपस्थित नयाँ समूहले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को सभापतिमा महेश खरेल र अन्य केहि पदाधिकारीको उम्मेदवारी पनि घोषणा भयो । जिल्ला भर कांग्रेस कार्यकर्तामा नयाँ तरंग छायो । धेरै जसो खुशी भए । कतिपय अचम्मित बने । किन भने धूरेले यस्तो खालको नयाँ समीकरण बन्छ भन्ने लागेकै थिएन् ।
यो समीकरण बन्नु अघि तीर्थ लामालाई शिव हुमागाईंले आफ्नो लागि सह महामन्त्री सुनिश्चित गरिदिए सभापतिमा सहयोग गर्ने बारे छलफल भएको र सहमति नभएको बजार हल्ला चलाईयो । सायद यो आचार्य समूहलाई भ्रममा पार्ने एउटा फण्डा थियो । जुन शिव हुमागाईले नाटक मञ्चन गर्न तीर्थ लामालाई लगाए ।
नाटक थायो या शिव र तीर्थबीच कुरा नै नमिलेको हो भन्ने सन्देश बुधबार बनेपामा आयोजित उम्मेदवारी घोषणा सभाले गर्यो । महेश खरेलको उम्मेदवारी घोषणा भएको केहि दिनमै पूर्व सभापति शिव हुमागाईं र तीर्थ लामाबीच पार्टी केन्द्रीय सभापति शेर बहादुर देउवाको निवासमा छलफल भयो ।
छलफल पछि तीर्थ लामा र शिव हुमागाई बीच सहमति भएको कुरा अघिल्लो पटक कुरा मिलेन भनेर हल्ला गर्नेहरूले फैलाए । मधु आचार्य समूहले धेरै जसो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्दा पनि शिव हुमागाईं प्यालन लगभग मौन जस्तै बसिरह्यो ।
यसरी मौन बस्नुको एउटै कारण थियो । मधु प्यानललाई सहज रूपमा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारी नपाउनु । तीर्थ लामाकै उपस्थितमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएका महेश खरेल मधु आचार्य प्यानलबाट जिल्ला सभापतिमा चर्चा गरिएको थियो ।
हालका सभापति आचार्य बागमती प्रदेशमा जाने र खरेललाई जिल्ला सभापति बनाउने लगभग सहमति बनिसकेको थियो । यो कुराको जानकार तीर्थ लामा र शिव हुमागाईं पनि थिए । आचार्य र खरेलको यहि चेन ब्रेक गराउन हुमागाईं लागे । उचित पात्र तीर्थलाई नै छाने । तीर्थले नेतृत्व गर्ने गरी नयाँ समीकरण गर्ने ग्राण्डडिजाईनर थिए शिव हुमागाईं ।
हुमागाईं र आचार्य बीच अहिले पनि अवस्था पानी बाराबारकै छ । एकले अर्कोलाई जसरी पनि सकाउने ध्याउन्नमा लाग्छन् । धेरै तीर्थ लामाले नयाँ समीकरण बनाएपछि हुमागाईं र आचार्यबीच अर्को समूह बन्न सक्ने आँकलन पनि गरे । तर तीर्थ लामाको नयाँ समीकरण केबल मधु आचार्य समूहलाई कमजोर बनाउने बाहेक अन्य कुनै थिएन् ।
जिल्ला सभापतिमा मधु आचार्य प्यानलबाट महेश खरेल बलियो प्रतिद्वन्द्वी थिए । खरेल बौद्धिक र युवाहरू बीच उत्तिकै लोकप्रिय छन् । खरेल सभापतिमा उठ्दा शिव हुमागाईं प्यालन अप्ठ्यारो पर्थ्यो । त्यहि भएर नयाँ समीकरणको नाटक रचियो । जुन कुरा समयमै पत्ता पाउन मधु प्यानलको युवा पङ्क्ति पछि पर्यो । त्यसको फाईदा हुमागाईं प्यालनले उठायो ।
नयाँ समीकरणको नाटक बनाउँदा मधु आचार्य प्यानलबाट जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिने उपयुक्त पात्रो नै नहुने शिव-तीर्थको विश्वास थियो । जुन एक हिसाबले सफल भएको छ । अब कि त हालका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले नै दोहोर्याउनु पर्यो की त तीर्थ लामालाई सभापतिमा पनि समर्थन गर्नुपर्यो ।
मधु आचार्य प्यानलले नयाँ पात्रो सभापतिका खोज्दा केबल उम्मेदवारका लागि उम्मेदवार मात्रै हुने निश्चित छ । मधु आचार्य समूहले अब हालका जिल्ला उपसभापति अच्युत पौडेल र कञ्चनचन्द्र बादेलाई सभापतिमा उठाउने सम्भावना पनि छ । तर आचार्य प्यानलले अब आफ्नो समूहको साख जोगाउन मात्रै उम्मेदवारी दिनेछ ।
जिल्ला सभापति सहितको पदाधिकारीमा कम्तिमा २५ सय मतदाता मतदान गर्ने छन् । शिव-तीर्थ प्यानलको उम्मेदवारी घोषणा सभामा सहभागीको संख्या हेर्दा जिल्ला सभापतिमा तीर्थ लामाको पक्षमा माहोल सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।